Abakhiqizi nabahlinzeki be-Shearling Scuff Slippers Yabesifazane Abafudumele baseChina |I-JNP
INKCAZELO YAWO WONKE UMUNTU: Isikhumba sezimvu sase-Australia esingu-100%.
NGAPHAKATHI/NGAPHANDLE: Zenziwe nge-TPR sole, lezi zicathulo zendlu zasendlini/zangaphandle zihlala isikhathi eside futhi zakhelwe ukuphatha izinsuku ezimatasatasa, zingaphakathi endlini ngenkathi zizulazula endlini noma ngaphandle ukuze zibambe imeyili noma zihambise inja.I-TPR inikeza ukuzinza okungasindi nokunethezeka okwengeziwe ngaphansi kwezinyawo.
STAYELA SCUFF: Lokhu kulula ukushelela kumklamo we-slipper we-scuff kunikeza ukubukeka okuhle ngokwedlulele futhi okuhlala kuntofontofo.
UKULAWULWA KWETHEMPERATURE: Hlala ufudumele ebusika futhi upholile ehlobo - ulwelwesi lwethu lwezimvu oluphefumulayo lushintsha ngokwemvelo izinga lokushisa lomzimba wakho lulwenze lube yinhlanganisela enhle yezinto ezivalekile neziphefumulayo.
Idizayini ye-Classic-soft real yesikhumba sezimvu ulwelwesi, isitayela futhi nenhle.
Induduzo engakaze ibonwe?Ukuthamba kubenza bafanelekele ukugcina izinyawo zakho zifudumele, kuyilapho ukwenza noma yini kuzokwenza izinyawo zakho zikhululeke futhi zifudumale, isikhumba sezimvu sase-Australia esingu-100% siwugqinsi, sikhola sezimvu esiluhlaza, sikushiya uzizwa sengathi uhamba phezu kwefu.Isikhumba sezimvu futhi singalungisa ngokwemvelo izinga lokushisa.Uma ufudumele, uvolo uyaphefumula, ususa umswakama ukuze izinyawo zome.Uma kupholile, uvolo ufudumeza ngisho nezinyawo ezingenalutho ezingeni lokushisa lomzimba wakho elivamile.
* 100% Uboya Bangempela Besikhumba Sezimvu base-Australia (I-Shearling) - Ngaphezulu: Isikhumba Se-Cow Suede
* Isikhumba sezimvu siphefumula ngokwemvelo, ama-slippers esikhumba sezimvu alungisa izinga lokushisa lomzimba wakho.Hlala ufudumele ebusika futhi upholile ngesikhathi sasehlobo.
* Lezi zikhumba zezimvu zine-sole enkulu yokuhamba ezindaweni eziqinile;
* Ama-Slippers e-Sheepskin afudumele, athambile futhi athokomele anesoli eliqinile.Gcina izinyawo zakho zifudumele.
Ama-slippers ethu esikhumba sezimvu angama-multifunctional slippers.Ungagqoka ama-pajamas nama-slippers endlini.Ikhululekile futhi iyitoho.Yiqiniso, uma ufuna ukuphuma, ungagqoka ama-slippers ethu asebenzayo.I-sole nayo iwukwelashwa okungasheleli, okunokungqubuzana okuphezulu futhi okungeke kwehla kalula.Singakwazi futhi ukwenza ngokwezifiso imibala ehlukene.Le mibala emithathu yimibala abathengi abanempendulo eminingi kakhulu: owodwa umnyama phakade, omunye unombala o-frost grey, kanti omunye u-maroon wakudala, ngamunye wawo u-100%.Singakwazi futhi ukwenza ngokwezifiso ilogo yakho.
Izicathulo ezinhle zezimvu ziyizitayela ezibonakalayo ngempela, ezinesikhumba senkomo esiphezulu esigoqa izinyawo zakho ukuze unikeze ukufudumala okufudumele, okuthambile nokuthambile.Iseduze nawe uma isemgwaqweni ophakathi nedolobha noma ikhaya elinethezekile.
Sinesipiliyoni seminyaka eminingi ezinkonzweni ezenziwe ngokwezifiso futhi singenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zakho.Okufana nephezulu, insole, i-outsole, njll. kungenziwa ngendlela oyifisayo, noma uma ufuna ukwenza ngokwezifiso eminye imibala, singenza okufanayo, sizokusiza wenze ukunikezwa okuhambisanayo, bese siqinisekisa umphumela nawe.Ukuqinisekisa ukuthi sisebenza kahle uma sixoxa.
Ekugcineni, ukupakishwa komkhiqizo kungenziwa ngokwezifiso, ukuze ukupakishwa komkhiqizo nakho kube nezici zomuntu siqu.
Sizobuyela kuwe phakathi kwamahora angu-6, sicela ubekezele futhi sizobuyela kuwe ngokushesha okukhulu.
Okwedlule: Amabhuzu Abesifazane Esikhumba Sezimvu Ngokwezifiso
Olandelayo: I-Custom Fluffy Indoor Evaliwe Iziliphu Zesikhumba Semvu Sangempela
Amaslayidi Adumile Esikhumba Sezimvu Yabesifazane Abanethezekile...